... 11:40:00 PM
12 May 2010 at 1:29 AM
သူငယ်ချင်း သံယောဇဉ်နဲ့ စံပယ်ကို ချစ်နိုင်အောင် ကြိုးစားလိုက်ပါ...ဖောက်ပြန်ပြီးမှ ပြန်ရောက်လာတဲ့ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ ချစ်သူကိုတော့ မေ့လိုက်ပါ...
Reborn Steven said...
ညိုလေး. စံပါယ်. မြန်မာပြည် . စလုံး..
အတွေးတွေ ခေါင်းခြောက်သွားတယ်..( အပိုတွေ တွေးနေလို့ ဖြစ်မှာပါ)။ ယောင်္ကျားလေး မိန်းကလေး အို အစုံပါပဲ။
ဘဝအတွက် ထာဝရ လက်တွဲနိုင်မဲ့သူကို ရွေးပါလေ။ မိဘဆွေမျိုး အသိုင်းအဝိုင်းကြား လူအများကြား ထဲမှာလဲအပါပေါ့..
ကိုယ် ဟာကိုယ်ဆောင့် ပြီးသေလိုက်ပါ
17 May 2010 at 5:12 AM